Umkhuleko wokuphelelwa yithemba Discover ➡️ Thola ku-inthanethi ▷ ➡️
Umkhuleko wokuphelelwa yithemba
La umthandazo wokuphelelwa yithemba Kuyasiza kakhulu, ikakhulukazi uma nisothandweni, ngoba nizama ukwenza konke okusemandleni futhi okungenakwenzeka ukugcina ubudlelwano noma ngisho nokuheha ukunakwa ngomunye umuntu, noma kunjalo, lowo muntu kungenzeka angabi nandaba nathi. Yilapho, lapho ukuphelelwa yithemba nokuphelelwa yithemba kuqala ukuvela, ngoba kuthonya imizwa yethu futhi kuveza ukuzidela okukhulu, njengoba kunjalo kulo mthandazo; Uma ufuna ukuthola eminye imininingwane efana nale, unganqikazi ukuqhubeka nokufunda i-athikili.
Yazi konke okufanele ukwenze kulo musho
1 Uyini umthandazo wokuphelelwa yithemba?
2 Luyini uthando?
2.1 Umkhuleko wokuphelelwa yithemba ubhekiswe endodeni
2.2 Umkhuleko wokubuyisa othandekayo
2.3 Umkhuleko wokubusa
2.4 Umthandazo ukuze bacabange ngami kuphela
2.5 Umkhuleko walowo obuya ngokushesha
2.6 Umthandazo wokuheha uthando osheshayo
2.7 Umkhuleko wokuphelelwa yithemba ku-Saint Mark
2.8 Umthandazo wokuphelelwa yithemba nokucabanga
2.9 Umkhuleko wokuheha uthando
2.10 Umkhuleko wokubopha iSan Marcos de León
Uyini umthandazo wokuphelelwa yithemba?
Njengoba kushiwo ngenhla lapho uthando lungabuyiselwa, ukuphelelwa yithemba kuyayenza into yakho ngakho-ke, siyakwazi ukwenza imihlatshelo ethile, ukunikela (izinto, amasiko, izingoma, njll.) Noma ngisho neziphonso, konke lokhu kusenzelwa ukuthola lolo thando olufiselekayo. Ngalesi sikhathi kulapho, sicabanga futhi sibheke imithandazo emihle kakhulu yokuphelisa ukuphelelwa yithemba noma ukufeza inhloso.
Lo mthandazo unamandla amakhulu futhi unamandla, njengoba umuntu ethandaza izigaba zawo, ukungenelela kwabaNgcwele abahlukahlukene kuyacelwa, njenge: San Marcos de León, Santa Rita, Santa Marta San Gregorio, Thaumaturgo, San Julius Tadeo, kanye ne-Santa Filomena eyaziwa kakhulu ngokuba yizidalwa ezixhumene kakhulu ne- ubuKristu.
Ukuzwa uthando kungenye yemizwelo ebangela ukujabula nenjabulo enkulu kumuntu. Kungakho ezikhathini ezihamba phambili zokuthandana ungazizwa ugcwele, ukukhohlisa, amaphupho, ithemba futhi ngaphezu kwakho konke ukuthembana, noma kunjalo, kukhona nezikhathi ezinzima futhi imibhangqwana izizwa inosizi, inganaki, ingakhuthazeki, ingathembi noma isaba kakhulu; kodwa ngaphezu kwakho konke ukuphelelwa yithemba, ngoba kuvela ukwesaba noma usizi lokulahlekelwa yilowo muntu omthandayo.
Lapho ifika kulo mzuzu wokwesaba noma wokuphelelwa yithemba, isithandwa siqala ukwenza konke okusemandleni futhi kwesinye isikhathi okungenzeki ukuze omunye umuntu ahlale eceleni kwakhe noma afinyelele enhliziyweni yakhe, imibhangqwana eminingi ayizazi izindlela zokuzigcina othandweni sempilo yakhe; Kodwa-ke, kulula kunokuba kubonakala, kufanele benze umusho olula futhi olula. Ngakho-ke sizokhuluma ngokuthi umthandazo wokuphelelwa yithemba ubhekene kanjani nokusiza ukufeza uthando esilufunayo.
Yize impilo ifaka ukufunda ukubhekana nezinselelo eziningi namashwa ukuthola injabulo, izingxabano zothando nazo ziyavela, futhi ngokuvamile zibanga ukukhathazeka. Ukuthuthukisa lo mbhalo, sibhekisa emthandazweni wokuphelelwa yithemba, nawo oveza ukwahlukaniswa kwemisho, okugxila kakhulu ezinkingeni zothando.
Umkhuleko wokuphelelwa yithemba ubhekiswe endodeni
Lo mkhuleko kufanele wenziwe ngenyanga egcwele ukwenza indoda iphelelwe yithemba, kubalulekile ukwenza lo mthandazo ngendlela efanele, inamandla amakhulu okuthi, ngesikhathi esifushane, ingqondo yayo ingenelelwe; futhi ngaleyo ndlela wenze ingqondo yakho igxile kuwe kuphela. Umkhuleko kumele unikelwe emoyeni wokuphelelwa yithemba ngokubeka nokukhanyisa ikhandlela elimhlophe, kumele liphindwe izinsuku ezintathu zilandelana.
La Umkhuleko wokwenza othandekayo abuye
Lesi sigaba se- umthandazo wokuphelelwa yithemba Isetshenziswa kabanzi ikakhulukazi ezimweni lapho umuntu esimthandayo noma uthando lwethu lusishiya khona, lusishiya sodwa. Kufanele yenziwe ngokungathi sína kakhulu, ngamandla nangokuzinikela okukhulu. Kuyadingeka ukuyiphinda kathathu futhi uzobona imiphumela ngokushesha, futhi, kufanele wazi ukuthi iyasebenza kakhulu ngokwesizinda esingokomoya sabo bobabili abesilisa nabesifazane.
Lesi siko sisebenza ukufeza ukulawula okuphelele kobuntu obufunwa umuntu; Lokhu kwenza ukuthi umuntu alahlekelwe amandla okunquma, futhi kusentando yomunye. Ukwenza lesi sipelingi kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo: kufanele kwenziwe ngeSonto kuphela, phakathi kwamahora: ayisishiyagalolunye kuya kweleshumi nambili ebusuku; bese ubhala lo musho ngoyinki obomvu ephepheni.
Umthandazo ukuze bacabange kuphela wami
Kuqondiswe ukuze umuntu omthandayo, acabange ngawe kuphela; Awudingi ukusebenzisa noma yini, ungakwenza nganoma yisiphi isikhathi nosuku, ayidingi indawo ekhethekile, konke okudingayo ukukhiqiza amandla lokholo. Ekugcineni kufanele uzinqamule, (wenze uphawu lwesiphambano), kathathu bese usho umusho olandelayo, makube njalo, makube njalo.
Umkhuleko walowo obuya ngokushesha
Lo mkhuleko unezinhloso ezimbili: eyokuqala, ukuthola indlela yokuthi lowo oshiye umshado abuye noma abuye ngokushesha. Futhi inhloso yesibili ukukhuthaza lowo muntu ukuthi aqale ukuphenduka okufeza ukuhlanganiswa kwalo. Ngokuncenga iNkantolo yezingelosi zasezulwini iyacelwa.
Umthandazo wokuheha uthando osheshayo
Umkhuleko wokuphelelwa yithemba wokuheha uthando olusheshayo uboniswa kulabo bantu okunzima kakhulu ukuthola umlingani. Sibhekene nale nkinga, siyahamba siyobuza uNkulunkulu uBaba, ukuze yena ngamandla akhe aphezulu aqoqele amandla kanye nomuntu osinikeza ukuzinza okufunayo angazuzwa.
Umkhuleko wokuphelelwa yithemba ku-Saint Mark
Lo mthandazo usetshenziswa ikakhulukazi ngabalandeli bamaKhatholika, ngoba uMark usondelene kakhulu noSanta Peter. Kungumthandazo onamandla futhi onamandla kakhulu ongasetshenziswa ngumuntu owufunayo.
Umthandazo wokuphelelwa yithemba nokucabanga
Lo mthandazo wokuphelelwa yithemba uphathiswe iSan Cipriano, wenziwa ngokukhanyisa ikhandlela eliluhlaza okwesibhakabhaka, elinomfanekiso kasanta uqobo.
Umkhuleko wokuheha uthando
Ngalo mthandazo wokuphelelwa yithemba, ungathola umuntu emahoreni angama-24. Ukuphumelela kwayo kuncike emandleni nasemandleni okholo; Yenzelwe uSanta Jude Thaddeus, kufanele kuthandazwe ngomfanekiso ezandleni zethu futhi kukhanyiswe ikhandlela eliphuzi, kufanele lishiywe likhanyisiwe ngemuva kokuphela komthandazo.
Umkhuleko wokubopha iSan Marcos de León
Kuvamise ukwenziwa ukuthambisa umuntu, kuletha ukuthula lapho ezwa khona ukuthi akukho; Ingasetshenziselwa othile othize, umlingani, isoka, noma umuntu omthandayo kuphela. Amazwibela abe:
San Marcos de León, egameni likaNkulunkulu ngiyakuncenga, Moya Wokubusa,
Umoya wokuphelelwa yithemba, umoya ongazinzile,
Ngikhuluma nabo ukuze bangisize ngibuse,
ukuphelelwa yithemba nokuphazamisa izinzwa ezi-5, imicabango,
Intando futhi isahlulelo of (…) kimi igama lami ngu (…).
Nginikela lo mthandazo eNgelosini Engcwele Engcwele (…)
Uma uluthandile ulwazi esilushiyela wena namuhla, unganqikazi ukuqhubeka nokufunda kabanzi ngebhulogi yethu futhi ufunde Amagama womuntu oshonile. Ngaphezu kwalokho, sinevidiyo ezokusiza ngayo yonke imibuzo yakho.
Imisho emifushane kamufi